जनताको प्रधानमन्त्री बन्ने कि ?
गणतन्त्र नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा बधाई तथा शुभकामना छ । देशले गरिबीको चंगुलबाट मुक्ति खोजिरहेका बेलामा तपाईं प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ । यसबेला बिदेशमा रहेको प्रवासी धेरै खÞुशी छन । तर, विगतका गुनासा, भविष्यका सम्भावना र वर्तमानका चुनौती धेरै छन् तपाईं सामु । सुरुवात कहाँ र कसरी गर्ने, कुन–कुरा आम जनताका लागि प्रम..
अजित मिजार हत्याले उब्जाएको प्रश्न
मेरो रगतमा आक्रोश छ । मलाई यो समाजले तल्लो दर्जाको नागरिक मानेको छ । तल्लो दर्जाको होस् भन..
BLOG : अब त साउँ–ब्याज बुझाउनुहुन्छ कि प्रचण्डजी !
नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्र सम्माननस्य प्रधानमन्त्रीज्यू मुलुकको ३९औँ प्रधान..
नेविसंघ अधिवेशन स्थगित गरे कांग्रेसको नर्सरी बन्द
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सदैव अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको संस्था नेपाल विद्यार्थी सं..
BLOG : बोलीले मात्र परिर्वन असम्भव
हामी जोकोहीलाई टिप्पणी गर्न सहज छ । राजनीतिमा यस्तो त भइहाल्छ नि । यस्तो भइरहन्छ, यस्तै यस..
BLOG : मिलेर काम गरौँ, हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ
हामी अर्काले के गर्यो भनेर टीकाटिप्पणी गर्नुभन्दा पनि के र कसरी राम्रो गर्न सक्छौँ भन्नेतिर लाग्नुपर्छ ? आफू सम्मानित हुने काम गरौँ । हामी सत्य बोलौँ, दूरदृष्टि राखौँ, ईष्र्या, डाहा र घमण्ड त्यागौँ । रिस हाम्रो ठूलो सत्रु हो । लाग्छ समयको रफ्तार हेर्दा जिन्दगी अति छोटो छ । बाँचिन्छ कहिलेसम्म त्यो पनि थाहा छैन […]
BLOG : काली बचाउन प्रहरीआतंक
कानुन सबैका लागि समान हुन्छ । सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ तर कानुनलाई धोती लगाई कसैले काम गर्छ भने त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई्र उन्मुक्ति दिनु वा सफाइ दिन खोज्नु कानुनको धज्जी उडाउनु नै हो । हरेक कामकारबाहीमा नीति हुन्छन् । नीतिअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर नीतिलाई नै तिलाञ्जली दिई काम गर्न कसैले खोज्छ भने उसको पछाडि [&hell..
बोलीले मात्र परिवर्तन असम्भव
हामी जोकोहीलाई टिप्पणी गर्न सहज छ । राजनीतिमा यस्तो त भइहाल्छ नि । यस्तो भइरहन्छ, यस्तै यस्ताकोे शृङ्खला चलिरहने हो भने राजनीति एउटा दूषित खेल हो भनेर प्रष्ट हुन्छ । असल मानिस राजनीतिमा जान निरुत्साहित हुन्छन् र खराबबाट शासित हुन बाध्य हुनुपर्छ । गरिब तथा निम्न वर्गका जनताको दुःख कहिल्यै हट्दैन । साँच्चै भन्ने हो […]
धरातल बिर्सिएको नेवि सङ्घको ११औं महाधिवेशन
सार्वभौम नेपालका लागि कैयांै नेपाली आन्दोलनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ निर्णायक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्यो । २००७ सालको राणाकालीन निरङ्कुश शासन अन्त्यका लागि होस् या वि.सं. २०१७ सालको संविधानसभाको निर्वाचनका पथमा अथवा २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहबाट पञ्चायत अन्त्यका लागि विभिन्न बहानामा विभिन्न प्रकृतिबाट नेपालको लोकतान्त्रिक..
नेकपा (माओवादी) ले वि.सं. २०५२ फागुन १ गते जनयुद्धको घोषणा ग¥यो । यस जनयुद्धमा जनसेनाको जस्तै प्रचार कार्य महत्वपूर्ण थियो । त्यस कार्यमा कर्णाली क्षेत्रमा आँउदा मैले अवसर पाएँ । मेरो रोजाइको विषयवस्तु मिसन पत्रकारिता भएकाले पार्टीले दिएको जिम्मा मैले गम्भीरताका साथ लिएँ । युद्धलाई वस्तुवादी ढङ्गवाट विश्लेषण गरी समयसापेक्ष बनाउन..
सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गर्न तीन नेताको प्रबल दाबेदारी (को कति उपयुक्त ?)
ओली सरकारको बहिर्गमनपछि बन्न लागेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट कसले नेतृत्व गरेर जाला ? हाल कांग्रेस वृत्त र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चाको विषय बनेको छ । सभापतिमा देउवा निर्वाचित भएसंगै एकातिर उनलाई आफ्नै पुराना सहयोगीहरूका अपेक्षा पुरा गर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर निर्वाचनका बेला अर्को क्याम्पबाट उनको पक्ष..
राष्ट्रवादी नेता स्व. राजेश्वर देवकोटाको सम्झना
राष्ट्रवादी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ राजेश्वर देवकोटाको निधन भएको आज (शुक्रबार)एक वर्ष पुरा भएको छ । भौतिक रुपमा यस संसारमा नरहेपनि नेपाली राजनीतिक इतिहासमा उहाँको परिचय एक राष्ट्रवादी नेताको रुपमा स्थापित रहेको छ । राष्ट्रवादी नेता देवकोटाले आफ्नो जीवनकालभर राष्ट्रियता तथा राष्ट्रियता अखण्डताको रक्षाका निम्ति कसैसँग सम्झौता गर्नुभएन ..
बीपीपुत्र शशांकलाई पत्र
महामन्त्री शशांक कोइरालाज्यू , स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । वीपीपुत्र भएका कारण तपाईँलाई यो पत्र लेख्दै छु, अरु भएको भए सायदै म पत्र लेख्थेँ होला । केहि समय अगाडी तपाँईको एक बिचार पढ्न पाएको थिएँ ।सक्षम हुदाँ पनि जागिर नपाएर भौतारिरहनु परेको रहेछ, कुनैबेला । तपाई एउटा लक्ष्य, सपना र उद्देश्य लिएर नेपाली राजनीतिमा आउनु भएको [&h..
ओलीजी जनता जान्न चाहान्छन्
ओलीजीले सरकारी ढुकुटीलाई ढुटीमाटी पारेर आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा उफारेर संसदमा बहुमत पुग्छ र ? जनता जान्न चाहान्छन् । देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरौं भन्दा माओवादीलाई खिस्याएकोमा महानता ठान्नेहरू स्थिरता कायम गर्ने कहलिने तर प्रचण्ड अस्थिरता निम्त्याउने कहलिने कसरी..
राजकीय मेसमा जोगीको भेष
देशमा भूकम्प गएकै हो । नाकाबन्दी भएकै हो । जसरी भूकम्प रोकियो त्यसैगरी नाकाबन्दी पनि । दुवैका परकम्पन अझै बाँकी छन् । अनि दुवैले दिएको पीडा पनि आलै छन् । मात्र यति फरक हो कि दुवै अहिले स्थिर छन् । जसरी देशको धरातल कमजोर छ, त्यस्तै राजनीति र राजनीतिज्ञका राष्ट्रवाद पनि । कसैले भाषणले देश […]
केसीको अनसन : कागले कान लग्यो भन्दैमा कान छाम्ने की कागको पछि दगुर्ने ?
मेरो नेपालमा कार्यरत सिनियर चिकित्सक मध्ये ८० प्रतिशत संग दोहोरो रुपमा चिनजान छ । तर डाक्टर गोविन्द केसीलाई मैले सुनेको बाहेक चिनेको छैन र सायद उनले पनि चिनेका छैनन् होला जस्तो लाग्छ । किनकि अनसन बस्नु भन्दा अगाडि केसीलाई उनका सहपाठी बाहेक अरु नागरिकले चिनेका थिएनन् त्यसमा म पनि एक हो । जनताले चिन्ने कुरात […]
राष्ट्रपतिज्यू गृहजिल्लालाई पूर्वको कर्णालीको रुपमा कहिलेसम्म परिचित गर्ने ?
भोजपुरको बन्ने वित्तिकै सबैले भन्छन् ‘देश भोजपुरेले खाएँ । जे छ भोजपुरेकै छ देशमा । अहिले माथि पुग्न कि भोजपुरको हुनुपर्छ । कि झापाको’ । अधिकांशको मुखबाट सुनिने सब्द हो यो । हुन पनि राष्ट्रपतिको गृहजिल्ला भोजपुर नै भएकाले त्यसो भन्नु पनि स्वाभाविक होला । झापाको प्रधानमन्त्री भएको सरकारमा संचारमन्त्री पनि भोजपुरकै छन् । नेपाल [..
कहिलेसम्म अस्थिरता यो देशमा ?
सम्पूर्ण पाठकहरुमा नमस्कार । एक स्वतन्त्र युवाको तर्फबाट म आफ्ना मनमा लागेका केही कुरा लेख्ने प्रयास गरेको छु । आज देशमा अस्थिरता छ, अराजकता छ, यो कहिलेसम्म र कहाँसम्म ? म एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले ठण्डा भई सोच्दै छु । तपाईंहरु पनि सोच्नुस् त, नेपालमा कति सरकार परिवर्तन हुन्छ ? देशमा व्यवस्था बदलियो तर अवस्था […]
जापानमा रहेका केटालाई छोरी नदिने !
सफा र चम्किला कपडाले सोफा छोपिएको कोठा । बीचमा टि टेबल । टेबलमाथि पानीको घडा । त्यसमाथि फूलले सजाइएको । त्यहाँ गएका टोली सोफामा बस्दै गफ गर्न थाले । घरकाले जस्तो केटी खोजिदिनुहुन्छ त्यहीसँग बिहे गर्ने मेरो निर्णय थियो । त्यसकारण उनले केटीको फोटोमात्र हेरेका थिए । सुन्दरता ठिकै थियो । जवानीले उन्मत्त उनको शरीरको […]
सुशीला कार्की सबैले गर्व गर्नलायक प्रधानन्यायाधीश बन्न सकून्
नेपालमा अहिले एउटा अनौठो संयोग बनेको छ । केही वर्षअघि मात्र पुरुषहरुसरह समान अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने महिलाहरु अहिले मुलुकका महत्वपूर्ण र प्रमुख अंगहरुमा प्रमुख जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । हालै मात्र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि मुलुकका प्रमुख तीन महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा महिलाहरु पुगेका छन् । यसअघि राष्ट्रप्रमु..
‘देशभरिका भ्रष्टाचारीहरू एक होऊँ’
केही वर्षयता डा. गोविन्द केसीको नाम मौसमी किसिमले भए पनि चर्चामा आउने गर्दछ र एकपटक फेरि यो नाम चर्चामा छ । लामो समयदेखि स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील उनको नाम डा. भगवान कोइराला, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, डा. उपेन्द्र देवकोटा, डा. वसन्त पन्त आदि झैँ चिकित्सकीय क्षमताका कारण सार्वजनिक हुन सकेन । अस्पताल परिसरमा अनशन बस्न थालेपछि उनको [..
शरणार्थी बन्नु मेरो बाध्यता
जापानमा नेपालीहरुले शरणार्थीका लागि निवेदन दिएर नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठामा आच पुर्याएको बारेमा मैले धेरै सुनेँ । १७ सयभन्दा बढी नेपालीको नाम जापान सरकारले शरणार्थीको सूचीमा राखेको कुरा दुई तीनवटा पत्रिकाबाट जानकारी पाएँ । तीमध्ये म पनि एक हुँ । यस विषयमा मैले गर्व गर्न खोजेको पनि हैन र मलाई शरणार्थी बनेकोमा अपसोच पनि छैन [&hell..
म बाहुनवादी नै हो
मेरो जन्म ब्राह्मण कुलमा भएछ । यो मैले कसैसँग अनुनय विनय गरेर, कसैलाई घुस ख्वाएर, कसैको भाग खोसेर या कसैको सर्वनाश गरेर भएको होइन । अरुले पहिचानको मुद्दा रटान लगाइरहँदा मैले कसैको डरले मेरो जनै फाल्नु धर्म निरपेक्षताभित्र पर्दैन । हो, अहिलेका युरोप अमेरिका गएर जनजाति दलित र मधेसीको कोटामा दीक्षित भएर आएका टाइवाला दाइहरुले [&hell..
योगको महत्व र नेपालको पर्यटनमा यसको सम्भावना
हिमालको सुन्दर देश नेपाल मनोरम हिमश्रृंखला प्राकृतिक सुन्दरता, शिवको भूमि र आदिकालदेखि ऋषिमुनि तपस्बिहरुको साधनास्थल, भगवान पशुपतिनाथको बासस्थान आदी–इत्यादी बिषयले गर्दा नेपाल पवित्र तिर्थस्थल तथा पवित्रभूमि रहेको कुरा पुराणहरुमा पनि सुन्न र पढ्न पाइन्छ । प्राचिन कालमा ऋषिमुनीहरुले गर्ने गरेका हरेक क्रियाकलाप प्राकृतिक उपचारको व..
शुल्कमा एकरूपताका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण जरुरी
नेपालमा सरकारी निकायले गर्ने कुनै पनि निर्णयमा निजी क्षेत्रले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । यसले गर्दा सरकारी निकायभन्दा निजी क्षेत्र बलियो र अटेरी बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । हालसालै मात्र ट्राफिक प्रहरीको कार्यालयले सडकमा लापरबाही गर्ने चालकहरूसँग लिँदै आएको शुल्कमा केही वृद्धि ग¥यो । तर यस विषयमा यातायात व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाए र ..
जननेता मदन भण्डारीको ६५ औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा बोल्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, ‘२०५० साल जेठ ३ गते उहाँको निधन नभइदिएको भए, जेठ १४ गते चितवनमा हाम्रो भेट हुने कार्यक्रम तय भएको थियो । हाम्रो भेटको समय ललितपुरका एक जना कमरेडले तय गर्नुभएको थियो । त्यसका लागि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराक..
शिक्षाका नाममा लुट
शिक्षा ज्ञान, सीप सिक्ने तथा सिकाउने पद्धति हो । यो निरन्तर चलिरहेने प्रक्रिया भएकाले भविष्यको बाटो निर्माण गर्न सिकाउँछ । आपm्नो जीवनलाई सार्थक तुल्याई भविष्य उज्ज्वल बनाउनका लागि विद्यार्थीहरुले रुचि अनुसारको शिक्षा लिन्छन् । पारिवारिक कारण, आर्थिक अवस्था, अन्धविश्वास, नजिकै विद्यालय तथा कलेज नहुनु तथा गरिबी आदि कारणले अझै पनि..
तिमीलाइ मनका कुरा भन्न नसक्दा……
नेपाली बिषयको कक्षा सकिनासाथ हामी केटाहरु बाहिर निस्कियौं,साथीहरु एकातिर गफ गर्दै थिए ,म एक्लै बसिरहेको थिएं । सुदन,अपेक्षा(नाम परिबर्तन)लाइ बोलाइदेउ नू। कसैको यो आवाजबाट म झस्किएं, तल हेरें । हामीभन्दा सिनियर तिम्रो दिदी हुनुहुंदोरहेछ । म तिमलिाइ बोलाउन भनेर कक्षाकोठातिर त गएं,अलि परैबाट तिमीलाइ हेरेँ अनि तिम्रो छेउसम्म त पुगें..